Vhidhiyo> = Mifananidzo + Nhau | Martech Zone
Vhidhiyo> = Mifananidzo + Nhau
Mugovera, Kukadzi 9, 2008 China, Gumiguru 31, 2013 Douglas Karr
Vanhu havaverenge. Icho hachisi chinhu chinotyisa kutaura here? Sa blogger, zvinonyanya kukanganisa asi ndinofanira kubvuma kuti vanhu havango verengi. Emails, mawebhusaiti, mablog, mapepa evachena, zvinyorwa zvinoburitswa, zvinoda kushanda, zvibvumirano zvekugamuchira, mazwi ebasa, zvisikwa zvakagadzirwa… hapana anoaverenga.
Isu takabatikana - isu tinongoda kusvika kumhinduro uye hatidi kutambisa nguva. Chokwadi hatina nguva.
Vhiki rino raive svondo rekumhanya-mhanya kwandiri mukunyora zvimwe zvekushambadzira, kupindura maemail, kunyora magwaro anodikanwa kune vanogadzira, uye kuisa tarisiro netarisiro pane izvo zvatinogona kuendesa… asi mazhinji acho haana kunyatsoshandiswa. Ndiri kutanga kuona kuti yakawanda sei mifananidzo inokanganisa uye nyaya zviri kune yekutengesa kutenderera, iyo yekuvandudza kutenderera uye yekumisikidza kutenderera.
Zvave pachena kuti madhayagiramu anodikanwa kuti agadzire chaiwo maitiro mundangariro dzevanhu. Zvichida ndicho chimwe chezvikonzero nei Zvakajairika Craft iri kubudirira kwazvo neyavo mavhidhiyo.
Mwedzi uno wekupedzisira, takapedza masikati neusiku pane RFP kwatakapindura mibvunzo yakawanda nezve chigadzirwa uye nekugona kwayo. Isu takadurura pamusoro pemashoko, takavaka madhayagiramu makuru uye takaita misangano yakati wandei nekambani, zvese mumunhu uye nhare. Isu takatogovera CD yekudyidzana yaive pfupiso yebhizinesi redu nemasevhisi.
Pakupera kwemaitiro, tiri kuzviwana pachedu # 2 mukumhanya.
Mukutendeseka kose, ese ehurukuro dzekutaura, zvekushambadzira uye zvinyorwa zvatakapedza maawa pazviri hazvina kujekesa mufananidzo mupfupi kumutengi uyo takanga tine chinhu chakakosha izvo zvavaida. Takaita… asi mumirwi yese yezvinyorwa, misangano, mameseji, nezvimwe, meseji iyoyo yakarasika.
Hazvina kusanzwisisika kuti kambani iri munzvimbo ye # 1 yakave nemukana wekuratidzira zvakazara (mune ye-mumba lab) nemutengi pane inogona kuburitswa. Isu takaunzwa mukuita pane imwe nguva yakazotevera zuva uye hatina kusundira kuratidzira kuri mumba. Isu taive nechivimbo chekuti tainge tanyatso kuzivisa iyo mhinduro dzavaida.
Mhinduro kubva kumutengi yaive yekuti kuratidzira kwedu kwaive kwakanyanya hunyanzvi uye kushaya iyo nyama yezvinodiwa nemutengi. Ini handibvumirane - isu takanangisa tarisiro yedu yese pane zvehunyanzvi maficha eedu system takapihwa kuti kambani yaive yakundikana zvinosiririsa neyavaimbovatengesa. Takaziva kuti chikumbiro chedu chakamira chega, saka taida kurova kumba kuti tekinoroji yedu yaive mutsauko wavanoda.
Ivo havana kuziva izvozvo.
Tichitarisa kumashure kwazviri, ndinofunga pamwe tingadai takadonhedza toni yekufona, zvinyorwa uye kunyange madhiagiramu uye nekungoisa pamwechete vhidhiyo yekuti mashandiro akashanda sei uye akapfuura zvavaitarisira. Ndinoziva ndiri kunyora zvakawanda nezve vhidhiyo munguva pfupi yapfuura pane yangu blog - asi ndiri kunyatso kuve mutendi pane yepakati.
Tags: live videoKushambadzira Vhidhiyochaiyo-nguva vhidhiyokutengwaYouTube
Wedzera Y! Rarama kune yako Sidebar!
Kukadzi 9, 2008 na7: 24 PM
Ndataura naMark nezve izvi nhasi paBhasiketi, uye chinhu chekutanga chandakamubvunza ndechekuti "wakadhirowa mifananidzo nemutengi?" Mune ruzivo rwangu, hapana chinounza bhizinesi nehunyanzvi hurukuro pamwechete zvirinani pane mhenyu "chena bhodhi" hurukuro uko iwe unowana zvese zvinongedzo, masystem, zvikonzero, vashandisi, nezvimwe kunze kwebhodhi muhurukuro yekurarama nemutengi. Ini ndinobvumirana newe kuti hapana anoverenga chero chinhu. Kana ini ndikanyora chimwe chinhu, ini ndinoda kuverenga pamwe nemutengi izwi rezwi - saka izvo zvinoda kuti zvinyorwa zvive zvipfupi.
Ndine urombo nekutaura kwenguva refu, asi wabaya bhatani rinopisa neni, uye ndapinda mukutaurirana nhasi…
Kukadzi 10, 2008 na3: 04 PM
Kutaurirana kwako naMark zvechokwadi kwakakurudzira iyi blog post uye ini ndinobvumirana newe. Tichifunga huwandu hwezvinhu isu taida kusundira kune iyi chaiyo tarisiro munguva pfupi, ini ndinotofunga kuenda kupfuura mifananidzo kwaizove kuri kudikanwa - pamwe musanganiswa wemifananidzo, yakaratidzirwa kuratidzira uye kuratidzira chaiko.
Isu takanyatso kumisikidzwa kubva pakutanga - imwe kambani yatove yakamisikidzwa tisina kuziva - asi chokwadi chekuti isu tine chigadzirwa chiri nani chingadai chakanamatira zvakanyanya dai takasiya vese vatori vechikamu vane ndangariro yakajeka yezvigadzirwa zvedu. 'zvirinani kugona.
Feb 10, 2008 at 12:22 PM
Ndine urombo kunzwa kuti hauna kuita kutengesa. Kutendeseka kwako kunokosheswa zvikuru. Icho chiitiko chinoninipisa kuve wechipiri pane chimwe chinhu chakakosha. Zvinoita sekunge warova chipikiri mumusoro pamwe nekunzwisisa kwako pane yepakati vhidhiyo. Kana iwe uchifunga nezve yekutengesa mharidzo sechiitiko chedzidzo kumutengi, iwe unozorangarira kuti vanhu vanodzidza munzira dzakasiyana. Vadzidzisi vanoziva kuti vamwe vanhu vanogadzirira kudzidza nekuteerera, vamwe vanhu vanoita kudzidza nekuverenga, vamwe vanhu vanoita kudzidza nekuita. Kana iwe uchikwanisa kupa akasiyana ezviitiko zvekudzidza, iwe unozosvika pazvinangwa zvako zvekudzidzisa. Iwe unogona kugara uine mapoinzi akawanda ane akasiyana masitaera akagadzirirwa pamberi, uye kuyera vateereri vako panguva yekuratidzwa. Kana vakakupa zvishoma zvinoita sekuti "ndinokunzwa, Doug", kana kuti "Handisi kuona kwauri kuenda kuno", unogona kuwana ruzivo rwudiki munzira yavo yekudzidza… .. wozoenda nedivi . Nhanho yakanaka nehurukuro inotevera. Uye nekuda kweiyo inotonhorera vhidhiyo diki pane Blogs pane iyo Commoncraft saiti! Icho chaive chitsva kwazvo! Uye zvakare nekutenda neiyo backlinks kubva kune yapfuura komendi… Ndiri kuisa yako blog pane yangu runyorwa rwema blog pamwe ne-hapana-inotevera pane yangu saiti!
Kukadzi 10, 2008 na3: 06 PM
Thanks Penny! Yako komendi inorova pane chimwe chinhu chakakosha - icho chinangwa chedu chaive cheku kudzidzisa mutengi. Dai iro raive iro rekirasi, vadzidzi vedu vangadai vakapenga. Tinofanira kuva vadzidzisi vari nani!
Feb 10, 2008 at 4:29 PM
Yakakura posvo, Doug. Mhinduro yangu yakareba, zvekuti ndakazviita posvo, pane kutaura:
Vhidhiyo ine simba = huru nyaya + kuuraya kukuru
Kukadzi 10, 2008 na3: 09 PM
Huru posvo, Martin! Ndinokurudzira munhu wese anoverenga iyi positi kuti aende kune yako
Pane mitemo miviri yekutanga iyo chero mushambadzi anofanirwa kutevedzera:
Mutemo # 1 (kubva kutapi venhau) - Munhu wepakati ane nhanho yekuverenga NEZVO nguva yekutarisa yegiredhi 6 Shandisa mitsara mipfupi uye mazwi madiki. Ruzivo rwakakosha runotanga, izvo zvisingakoshe zvinoenda kwekupedzisira.
Mutemo # 2 (kubva kushambadziro) - Isu tinobhombwa neanopfuura makumi matatu ezviuru mameseji anonyengetedza pazuva (izvi zvinopfuura kushambadza chete). Kuti ucheke nepakati, kunyangwe kune vanhu vane hungwaru, unofanirwa kutevedzera Mutemo # 30,000.
RFP yakanaka ingori mapeji mashoma uye inongogadzirisa izvo zvinodiwa nemutengi, kwete kutaura nezve iyo inopindura kambani, maitiro avo, kana kusanganisira mijenya uye yakawanda yezvinhu. Kana iwe uchidaro, sanganisira ivo mune indekisi, asi chete sanganisira izvo zvinhu zvaunofanira kunge uine.